Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ry mpandraharaha fizahan-tany Galapagos: tsy misy fitomboan'ny fizahantany intsony!
Ny Fikambanan'ny Mpikirakira ny Galapagos Iraisam-pirenena (IGTOA) dia niantso ny governemantan'i Ekoatera hametra ny fitomboan'ny fizahan-tany any amin'ireo Nosy Galapagos ary hifehy am-pitandremana ity sehatra mitombo haingana eo amin'ny sehatry ny fizahantany nosy ity.
Tao amin'ny taratasy iray nalefa tamin'ny minisitry ny fizahantany any Ekoatera, Enrique Ponce de León tamin'ny 5 feb, IGTOA dia naneho ny ahiahiny fa ny tahan'ny fitomboan'ny fizahan-tany an-tanety nandritra ny folo taona lasa dia tsy maharitra ary mety hiteraka fahavoazana tsy azo ovaina amin'ireo tontolo iainana nosy. ary fiainana dia.
Teo anelanelan'ny taona 2007 ka hatramin'ny 2016, raha ny statistikan'i Galapagos National Park dia nitombo 39 isan-jato ny fahatongavan'ireo mpitsidika rehetra tao amin'ny Nosy Galapagos (avy amin'ny 161,000 ka hatramin'ny 225,000). Nandritra io vanim-potoana io ihany, ny isan'ny mpitsidika mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana an-tanety dia nitombo hatramin'ny 79,000 ka hatramin'ny 152,000 (fiakarana 92 ​​isan-jato), raha nihena kosa ny fizahan-tany an-tsambo, avy amin'ny mpitsidika 82,000 ka hatramin'ny 73,000 fotsiny (fidinana 11 isan-jato) .
“Betsaka amin'ireo orinasanay mpikambana no mivarotra fitsangatsanganana an-tanety any Galapagos. Tsy manohitra ny fizahan-tany mifototra amin'ny tany isam-paritra izahay, ary, raha voafehy tsara dia manohana azy izahay, "hoy i Jim Lutz, filohan'ny Birao an'ny IGTOA ary ny filohan'ny Vaya Adventures. “Saingy ny zava-misy dia 100 isan-jaton'ny fitomboan'ny fizahan-tany Galapagos tao anatin'ny 10 taona lasa dia vokatry ny fitomboan'ny fizahantany miorina amin'ny tany. Ary tsy toy ny fizahan-tany any an-tsambo, izay misy fetra farany amin'ny isan'ny mpandeha, tsy misy fetra na amin'ny isan'ny olona afaka manao dia an-tanety aza. Tsy maharitra ny fitomboan'ny fizahan-tany maharitra eto amin'ity tontolo marefo ity. ”
Nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2000, ny ankamaroan'ny mpizahatany Galapagos dia nandray anjara tamin'ny fizahan-tany miorina amin'ny sambo, izay efa ekena hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena ho maodely ho an'ny fizahan-tany voafetra sy voafehy tsara. Ny governemanta Ekoatora dia nametraka quota henjana tamin'ny habetsaky ny farafara (fandriana) navela ho an'ny sambo fitaterana an-tsambo Galapagos ary nametraka satroka 100 satria ny isan'ny mpandeha indrindra zakan'ny sambo rehetra. Tsy misy fameperana na fitsipika mifehy ny fizahantany miorina amin'ny tany. Raha mitohy tsy miato ny tahan'ny fitomboana ankehitriny, dia hisy mpitsidika mihoatra ny iray tapitrisa isan-taona ao amin'ny Nosy Galapagos ao anatin'ny 35 taona.
Manomboka manamarika ny mety ho fiantraikan'ity fitomboan'ny fizahan-tany tsy voafehy ity ny haino aman-jery iraisam-pirenena. Ny CNN sy ny mpanonta boky Fodor dia nametraka ireo nosy tamin'ny lisitry ny toerana tsy tokony hitsidihany tamin'ny taona 2018, nitanisa ireo ahiahy momba ny fiatraikany ratsy eo amin'ny fizahan-tany any.
Tamin'ny 2007, UNESCO dia nandray ny dingana tsy manam-paharoa hametrahana ireo nosy amin'ny lisitry ny lisitry ny vakoka manerantany ho an'ny loza ateraky ny fandrahonana isan-karazany, ao anatin'izany ny fizahan-tany tsy voafehy sy ny fitombon'ny mponina. Nesorina tamin'ny lisitra ireo nosy tamin'ny 2010, saingy tamin'ny volana jolay 2016 dia naneno lakolosy fanairana indray ny UNESCO tamin'ny famoahana ny tatitra milaza fa tsy misy paikadin'i Ekoatera mazava hanakanana ny fitomboan'ny fizahantany haingana ho loharanom-piahiahy lehibe.
"Tsy misy toerana hafa eto ambonin'ny tany toa an'i Galapagos, toerana ahafahanao mifanakaiky sy manokana amin'ny fiainana dia", hoy ny mpikamban'ny IGTOA, Marc Patry, avy amin'ny orinasa mpikambana ao amin'ny IGTOA CNH Tours. “Nahagaga ahy foana ny asa nataon'ny governemanta Ekoatera hitantanana hentitra ny fizahan-tany any an-tsambo. Saingy mazava ho azy, tsy mahita porofo aho fa mifandraika amin'ny fizahan-tany an-tanety misy fiahiahy sahala amin'izany. Mahita tsunami fitomboana ao amin'io sehatra io izahay. Raha tsy misy zavatra vita tsy ho ela dia atahorana hanimba ny asa tsara rehetra natao hatrizay », hoy i Patry, izay tao amin'ny Ivon-toerana Fikarohana Charles Darwin nandritra ny efa-taona, narahin'ny 11 taona niasa tao amin'ny UNESCO's World Heritage Center.
Araka ny filazan'ny mpahay siansa, ny fitomboan'ny fizahan-tany tsy voafehy dia miteraka fandrahonana lehibe ho an'ny Nosy Galapagos. Ny lehibe amin'izy ireo dia ny fahafahan'ny karazan-java-manimba vaovao manimba rehefa mihabe ny fandefasana entana sy ny fahatongavan'ireo fiaramanidina mpandeha. Ny Blackberry Wildberry tena mahery setra, ohatra, dia nahatonga ny fahaverezan'ny 99 isan-jaton'ny ala Scalesia endemika tao amin'ireo nosy roa lehibe indrindra, Isabela sy Santa Cruz. Miaraka amin'ny fiakaran'ny fizahan-tany miorina amin'ny tanety dia betsaka ny fandefasana entana, ny fotodrafitrasa bebe kokoa, ny arabe bebe kokoa, ary ny fanerena bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny fitomboana, zavatra izay vao mainka ho sarotra ny mampiato ny fotoana maharitra.